Matongerwo eNyika, 01 Chikunguru 2017
Mugovera 1 Chikunguru 2017
Murimi Muchena, VaSmart, Voshushikana neKudzingwa kweVashandi Vavo kwaRusape
Vashandi vaVaSmart vave kugara musango pamwe nemumakomo ari pedyo nepapaurazi reLesbury Estates apo pavakadzingwawo zvechisimba nemapurisa.
#Mudzidzivhota Inoparurwa neVadzidzi muHarare
Mukuru wevechidiki muMDC T-Youth Assembly, VaHappymore Chidziva, vaudzawo vechidiki ava kuti vakasataura musarudzo dza2018 vanenge vaparara.
VaMugabe Votuka Madzishe neVari Kuita Chizivano muZanu PF
Vachitaura pamusangano wavaita neChishanu nevechidiki vebato ravo panhandare ye Mucheke, VaMugabe vatsamwira hutungamiri hwebato ravo nemadzishe vachiti vave kudzosa varungu mumapurazi zvisiri pamutemo webato ravo.
Ecobank Yokonzera Mutauro Zvopa Kuti Vashandi Varatidzire
Mutevedzeri wemunyori mukuru weZIBAWU, VaShepherd Ngandu, vanoti sangano ravo rasvika pakutora danho iri nekuona kuti bhanga re Ecobank Zimbabwe harisi kuda kubaira vashandi varo vakawanda zvitupa, izvo zviri kuita kuti varambe vachishanda sema contract kana kuti casual.
Nyanzvi Dzozeya Danho raVaNkosana Moyo
Kunyangwe hazvo ongororo yakaitwa neAfrobarometer iri kuratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa, izvi zvinenge zvakona n’anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatan
VaPatson Dzamara Vanowanikwa Vaine Mhosva
Nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, VaPatson Dzamara naVaMakomborero Haruzivishe, vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita.
VaMugabe Vanoonekana neVakambotungamira Botswana, VaMasire
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vabatana nemhuri yeBotswana pamwe nevamwe muAfrica mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri weBotswana, VaKetumile Quett Masire, avo varadzikwa kumusha kwavo kuKanye.